Damauli Fm 94.2 MHz.
दमौलीका होटलमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले लोगो टाँसेको छ । बजारका होटलको स्तरीकरण तथा अवस्था सुधारमा दबाब दिने उद्देश्यले स्टिकर टाँस्ने अभियान शुरु गरिएको डिभिजन प्रमुख शिवजी बरालले बताए । ‘यसले होटललाई सरसफाई र गुणस्तर वृद्धिमा दबाब दिनेछ,’ उनले भने । अभियानको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले उद्घाटन गरे । दमौलीका पाँचवटा...
व्यास १० को दुम्सीचौरमा नारेश्वर ताल निर्माण थालिएको छ । वडालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुरुप ताल निर्माण र पर्यटकीय विकासका पूर्वाधारलाई सँगै अघि बढाइन लागिएको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले बताए । शुरुवाती चरणमा झण्डै ७८ लाख रुपैयाँको लागतमा नारेश्वर खोलामा बाँध निर्माण थालिएको छ । बाँधको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री...
धान फाँटः व्यास १ अम्रेनीस्थित धान फाँट । तनहुँमा यस वर्ष वर्षे धानको खेती राम्रो भएको किसानहरुको भनाई छ । तस्बिरः दमौली खबर
व्यास ५ बेनीपाटनमा यसै वर्षबाट बन्न लागेको 'व्यास पराशर पार्क'को डिजाईन नमूना । श्रोतः शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय गोरखा
महिलालाई सीपः व्यास नगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयको आयोजनामा भएको चप्पल निर्माण र दालमोठ बनाउने तालिमको उद्घाटनपश्चात मन्तव्य व्यक्त गर्दै उप प्रमुख मीरा जोशी । वडाका महिलाहरुका लागि स�
धान दिवसः धान दिवसका अवसरमा बिहिबार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भानु नगरपालिकाको चुँदी फाँटमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिरः दमौली खबर
अभियुक्त सार्वजनिकः व्यास १ भादगाउँमा कलाकार विक्रम परियारको हत्यामा संलग्नताको आशंकामा पक्राउ परेका युवा युवती । घटनामा संलग्न दुई युवती तथा चार युवालाई पक्रिएको प्रहरी उपरीक्षक उमेशर
दमौलीका होटलमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले लोगो टाँसेको छ । बजारका...
ओलीको सम्बोधनमा एमालेले शक्ति देखाउने
दमौली । नेकपा एमालेले भानुमा आगामी भाद्र २३ गते हुने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको...
सैनिकले आफ्नै सहकर्मीमाथि गोली हाने
पोखरा । पोखरामा एक सैनिकले आफ्नै सहकर्मीको गोली हानेर हत्या गरेका छन् । फेवाताल किनारमा...
क्षतिपुर्ति दिन कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
इटहरी । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढि पीडितको उद्दार र राहतमा सरकारले कुनै कसर...
विकटलाई निकट बनाउने 'राजेन्द्र सपना'
पवन पौडेल दमौली । तनहुँको कछार भनेर चिनिने ऋषिङले अहिले विकासमा फड्को मार्ने सपना पालेको छ...
बन्दीपुरको सिमलटरमा डेढ करोडको खानेपानी शिलान्यास
दमौली । बन्दीपुर गाउँपालिकाको सिमलटारमा डेढ सय घरधुरीलाई लक्षित गर्दै खानेपानी तथा...
पवन पौडेल दमौली । छिमेकका ठूला सहरका तुलनामा विकासका भौतिक पूर्वाधार कम भएको आरोप खेप्ने...
गाउ“को सिंहदरबारमा खोई सदाचार ?
हाम्रो स्थानीय सरकार अनि सिंहदरबार को अधिकार घरघरमा भन्ने भ्रमवादी विचार वास्तविकतामा ...
-पवन पौडेल चार वेद, महाभारत र १८ पुराणका रचयिता महर्षि वेदव्यासको तपोभूमि दमौलीले...
ओलम्पिक स्वर्ण पदक बिजेता विल्मा रुडोल्फले भनेकी छन्,‘संघर्ष बिनाको पुरस्कारको त्यति...
नेपाल एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटको आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग ६ विकेटले पराजित...
‘रातो घर’सँगै जेठ महिना प्याक
यो बर्ष विभिन्न महिनामा मिति प्रदर्शन गरेर पनि रिलिज हुन नसकेको चलचित्र ‘रातो घर’ अब...
नेपालमा यतिबेला सौन्दर्य प्रतियोगीताको बाढी नै लागेको छ । विभिन्न नाम दिएर दैनिकजसो...
संघीयताको शुरुवाती अभ्यासमा प्रदेश सरकारहरु कमजोर ठहरिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मको कार्यप्रगति उतिसाह्रो सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुने योजना तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यसम्पादन उतिसाह्रो सकारात्मक नभएको सरकारबाटै प्राप्त तथ्यांकहरुले बताइरहेका छन् । लामो समय आवश्यक कानून बनाउने झमेलाबाटै पार नपाएको सरकार अहिले त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुन लागे पनि कार्यसम्पादनको गति कमजोर देखिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले सरकारले अब गति पकडिसकेको दाबी गरेका छन् । तर प्रदेशकै उप सभामुखले तनहुँको एक कार्यक्रममा...
Damauli Dairy 2073-12-10
Damauli Fm 94.2 MHz